Saxafiyiin Soomaliland lagu xiray - BBC Somali
Saxafiyiin Soomaliland lagu xiray
Axmed Saciid Cige BBC Somali
10 Maajo 2014
Image caption Boliiska Somaliland ayaa xiray saxafiyiin madaxbanaam
Boliiska magaalada Hargeysa ayaa xabsiga u taxaabay gudoomiyaasha wargeysyada Haatuf & Somaliland times Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo tafatirihii wargeyska Haatuf Axmed Cali Cige , kadib markii labada suxufi ay hortageen maxkamada gobolka Hargeysa oo dhegeysaneysay dacwad xeer ilaaliyaha somliland ku soo oogay wargeysyadaasi .
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Somaliland Axmed Mire ayaa BBC u sheegay in sababta loo xidhay suxufiyiintan ay tahay –siduu hadalka u dhigay-iyagoo buuq iyo rebshed ka kiciyay dhegeysiga maxkamadda oo manta dhegeysaneysay laba markhaati oo furayay dacwada lagu soo eedeeyay hore wargeysyadan .
Hase-yeeshe Qareenka difaacayay suxufiyiinta wargeysyada Haatuf & Somaliland Xasan Cali Banfas ayaa isna BBC u sheegay in labada eedeysane yuusuf Cabdi Gaboobe iyo Amed Cali Cige aan maxkamadu manta fursad u siin ay isku difaacaan .
Qareenku wuxuu ku tilmaamay maxkamadda mid u afduubneyd laba wasiir ayuu yidhi oo ciidan watay oo iyagu ahaa wasiiradii ay wargeysyadani ka qoreen wararka musuqmaasuqa la xidhiidha oo haddana la sheegay inay markhaatiyaal yihiin .
Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA Xasan Maxamed Yuusuf oo BBC la soo xidhiidhay ayaa ku tilmaamay xadhigan suxufiyiinta Haatuf mid sharci darro ah mar haddii dhegeysigii dacwada loo haystay ay socoto ayuu yidhi .SOLJA waxay kaloo cambaareeyeen xayiradii wargeysyada Haatuf iyo Somaliland Times ee bishii hore .
Sida laga warqabo , Wargeysyada Haatuf & Somaliland Times waxay boliisku xarumahoodii xidheen 7dii April 2014 , iyadoo xeer ilaalinta Somaliland ku soo dacweysay eedo ay ku sheegtay Afllaagadeyn Madax Qaran iyo warar been abuura oo khalkhal gelinya nabada Somaliland .
Laakiinse , dhinacooda gudoomiyaha Wargeyska maalin laha af soomaaliga ee ka soo bixi jiray Hargeysa ee HAATUF iyo wargeyska kale ee la mataanaha ah ee todobaalaha ingirisiga ku soo baxa ee Somaliland Times yuusuf Cabdi Gaboobe ayaa hore u sheegay in waxa lagu xidhay wargeysyadan ay yihiin warar ku saabsan musuq-maasuq ay ka qoreen wasiiro ka tirsan Somaliland iyo wiil uu soddog u yahay Madaxweyne Siilaanyo .
Sanadkii hore 2013 ayaa sidan oo kale loo xayiray Wargeyskii HUBAAL ee maalin walba ka soo bixi jiray Hargeysa oo ilaa iyo haada xiyiran .